Migrationsverket-ka oo soo bandhigay tirada dadka lagu xukumay Musaafurinta ee xogtooda lagu wareejiyay Booliska Sweden - Idman News
Migrationsverket-ka oo soo bandhigay tirada dadka lagu xukumay Musaafurinta ee xogtooda lagu wareejiyay Booliska Sweden
Waxaa dadkaa ka mid ah gabar 19-jir ah oo la yiraahdo “Maja” kana soo jeedda Afghanistan, taasoo 3 jeer diidmo laga siiyay dalka Sweden. Waxay Maja si dhuumaalaysi ah ugu nooshahay Sweden.
– Ma aqaanno waxa dhici raba, in badan baan ka fikiraa wixii aan samayn lahaa, balse ma doonayo inaan ku laabto Afghanistan.’’ Ayay tiri Maja.
– Haa waa sax, maxaa yeelay dadkani cinwaan uma reebaan Waaxda Socdaalka, sidaa darteed ma naqaanno meel aanu ka raadino, balse waa dhacdaa inaan mararka qaar helno xogsiin hoose oo ku aaddan halka qofka laga heli karo,’’ ayuu yiri Pont.
– Markii nala siiyay diidmadii ugu dambaysay, waxaana garowsaday inaan qofna na caawin doonin, sidoo kale nalooma ogola inaan shaqaysanno, si kastaba, shaqo suuq madow ah ayaan helay, lacagtu waa yar tahay, ha yeeshee waxaan ku helnay guri yar oo aan degno iyo cunno ay ila cunaan hooyaday iyo walaalkay,’’ Ayay raacisay Maja.
Sidee ugu fudud ee ku Xareesan karaa Sharciga ku meel gaarka ee iga dhacay
Hogaanka Midowga Yurub oo loo doortay Qof Haween ah Markii ugu horeesay
Xisbiga Sverigedemokraterna oo markale soo jeediyay in Qaxootiga la yareeyo
Previous Previous post: Xulka qaranka wadanka Djibouti ayaa gaaray guul taariqi ah, kadib markii ay ka badeyeen xulka Eswatini
Next Next post: “waajib maaha in la qaato bileydh nambarka cusub ee ay bixiso wasaarada jida…
Wararka Maqal iyo muuqaal (TV, AUDIO, VIDEO) (21,903)